Rasmi: Filimka De De Pyaar De iyo mudo labo todobaad ah ganacsiga uu sameeyay | Filimside
Home BOX OFFICE Rasmi: Filimka De De Pyaar De iyo mudo labo todobaad ah ganacsiga...
Ajay Devgn, Tabu iyo Rakul Pureet Singh filimkooda De De Pyaar De ayaa ganacsi wanaagsan sameeyay todobaadkiisa labaad wuxuuna keenay 21.75 Crore (Trade Figure) taasi oo ka dhigan wadarta guud mudo labo todobaad ah inuu soo xareyay filimkan 78.75 Crore (Trade Figure) halka kooxda iska leh filimkan shaaca ka qaadeen labo todobaad inuu kusoo xareeyay 84.49 Crore (Producer Figure).
Ajay Devgn filimkiisa De De Pyaar De HIT dhameestiran wuu noqon lahaa balse wuxuu noqday mashruuc reer magaalka daawadaan oo magaalooyin waa weyn ka gadmo halka gobolada dhexe iyo kuwo fog fog filimkan siweyn kaga gadmi waayay sidaa darteed waa filim guuleestay oo Semi Hit ah.
Sida haatan muuqato filimka De De Pyaar De 90 Crore wuu gaari doonaa cimri ahaantiisa balse waqti badan ma heesto madaama 5 bisha June ee kaabiga nagu soo heyso tiyaatarada la wareegayo filimka weyn Bharat ee Salman Khan hogaamiyaha ka yahay.
Fadlan hoos ka eeg mudo labo todobaad ah ganacsiga uu sameeyay filimka De De Pyaar De soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Todobaadka kowaad – 56.94 Crore
Todobaadka labaad – 21.75 Crore
Wadarta Guud – 78.69 Crore (Trade Figure)
Previous articleShabakada BOI oo cadeesay Ranveer Singh inuu noqday Atooraha suuqyada caalamka Bollywood-ka ugu awooda badan!
Next articleMa runbaa shakhsiyada Johnny Depp ee Captain Jack Sparrow? Maxaase ka jira inuu ahaa shakhsi muslim ah?